Author Topic: Caabuqa Fangaska ee Faraha Cagta Gala (Read 51856 times)
« on: May 19, 2016, 05:50:26 PM »
Waxaan ka hadlayaa maanta, cillad ku badan bulshada qeybo ka mid ah sida ciyaartoyda, askarta, dadka safarrada u baxa sida kuwa la shaqeeyo hay'adaha oo booqdo tuulooyinka iyo miyiga.
Xanuunkaan wuxuu galaa faraha dhexdooda, marka hore wuxuu ku bilawdaa cuncun uu qofka u bogayo inuu xoqo, kadib waxay keentaa jeexjeexdin ama dildillaac, kadibne waxaa ku samaysmo waxyaabo cadcad sida sawirka ka muuqdo, kadibne ur ayay yeelataa, haddii aan la daawaynin, infekshanka wuxuu u gudbi karaa qeybta hoose oo jirka ama waxaa ku dul tarmi karo jeermiska bakteeriyada, kadibne cagta ama lugta oo idil ayaa infekshanka wada qaadi karto.
Caabuqaan faraha galo waxaa keeno jeermiska fangaska, waa jeermis jecel inuu ku dhaco kuna tarmo meelaha huurka ah oo dhididka leh.
Caabuqa wuu ku faafi karaa faraha kale ee cagta, wuxuu kaloo u gudbi karaa ciddiyaha, haddii aad xoqdid kadibne aad taabatid meelo kale oo jirka ka mid ah.
Haddii aad kabaha ama iskaalshooyinka aad la qaadatid qof kale waad ka qaadi kartaa.
Cilladaan waxay badanaa timaadaa:
Haddii aan cagaha safiican loo dhaqin, kadibne la qallajin
Haddii aad markasta gashnaato kabo xiran ama boots-ka, tanoo hawada u diidayso in faraha gaarto.
Haddii aad kabo la'aan ku socotid meel laga qaadi karo fangaska.
Haddii aad dharka ama kabaha la isticmaashid qof qaba xanuunkaan.
Haddii aad qabtid xanuun caawin karo jeermiskaan inuu kugu tarmo sida xanuunka macaanka.
Daawooyin loo isticmaalo cilladaan ayaa jiro, kuwaas oo ah kuwa lagu buufiyo faraha dhexdooda oo jeermiska dilo iyo kuwa la marsado sidii kareemyada, iyo kuwa sidii kaniinada oo kale loo qaato, badanaa daawada waa lagu bogsadaa, laakiin waxaa muhiim ah in laga fogaado asbaabta keento, hooyada uurka leh ama nuujinayso ma qaadan karto kuwa kaniiniyaasha ah.
Waa muhiim in aad dhakhtar la xiriirtid haddii aad cilladaas isku aragtid, waa wax si sahlan loo daawayn karo markay cusub tahay, mahadsanidiin.
Views: 93965 January 09, 2016, 03:42:34 PM
Views: 3634 May 31, 2011, 12:18:03 AM
Views: 30527 December 23, 2015, 02:29:30 PM
Su'aal: maqaarka faraha gacanta iney miin yeelanayaan?
Views: 5716 April 30, 2011, 08:23:40 PM
Views: 4556 August 23, 2013, 12:58:50 PM